–अजय अलौकिक गत डिसेम्बर १८ मा चीनले खुलापन र सुधार नीतिको चालीसौं वर्षगाँठ मनाएको छ। खुलापन र सुधार नीति लागू गरेकै कारण चीन आजको वैभवशाली स्थितिमा पुगेको हो। चीन विश्वको
-वसन्त खड्का, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पोखरामा आयोजित लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिन आह्वान गरे । सामान्यतः वित्तीय संस्थाले ऋण लिन अर्थमन्त्रीले आह्वान गर्नै पर्दैन ।
राजा महेन्द्रले कांग्रेस नेता विपीसंगको सम्वाद किन रेकर्ड गर्थे ? यस्तो छ कारण
मलाई बीच–बीचकाबाट खबर आउँथ्यो, राजा जहिले पनि उट्पट्याङ–उट्पट्याङ कुराहरु भन्थे । पहिले त मलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नलाई नै राजाले एक–डेढ महिना ढिलो गरे । त्यो मैले भनिसकेको छु । त्यसपछि
‘विवादित चोलेन्द्र’ मार्फत् संसदीय सुनुवाई समितिको अग्नीपरीक्षा, सर्वाेच्चको संवेदनशीलता जोगिएला ?
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको इतिहासमा पहिलो पटक अस्वीकृत भए । जोशी हाल सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका छन् । सर्वाेच्चको
शशांक कोइरालाको हिन्दूराष्ट्र माग : कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने अचुक सूत्र बन्ला ?
प्रधानमन्त्रीको आलोचनाको रहश्य : ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम !
-सुनिता बराल ‘आलोचनाबाट बच्ने उपाय हो – केही नगर्नु, केही नभन्नु र केही नबन्नु ।’ यो भनाई दार्शनिक एरिसटोटलको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम, अहिलेको परिणाम र उहाँको